Xanta, Kaniisada Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Riwaayadda telefishanka Mareykanka "Hee Haw" (laga soo bilaabo 1969 ilaa 1992 oo leh heesaha wadaniga ah iyo sawir gacmeedyo) waxaa jiray qeyb kaftan ah oo ay la leeyihiin "afar xanta" oo ku heesay gabay yar, qoraalka oo u socday sidan oo kale: "Dhageyso, dhagayso ... annagu kuma nihin kuwa halkaas jooga orod oo faafi wararka xanta ah, maxaa yeelay, sababta oo ah… annagu ma nihin kuwa wada sheekooyinka xanta, iyo waligeenna ... dib uma noqon doonno nafsaddeena mar labaad, hee-haw oo diyaar ayaan u nahay, maxaa yeelay goor dhow waad ogaan doontaa waxa ugu dambeeyay ”. Waxay u egtahay wax lagu qoslo, miyaanay ahayn? Waxaa jira noocyo kala duwan oo xanta. Xaqiiqdii, waxaa jira xanta wanaagsan, xanta xun, iyo xitaa xanta inay tahay fool xumo.
Ma jiraan wax la mid ah xanta wanaagsan? Xanta waxay runtii leedahay dhowr macno. Mid ka mid ah wuxuu la xiriiraa isweydaarsiga tooska ah ee wararka. Tani waxay ku saabsan tahay in midba midka kale ka war hayo. “Maryan mar labaad ayay timo qurxin jirtay timaheeda”. "Hans wuxuu iibsaday gaari cusub". "Julia waxay dhashay cunug". Qofna kuma xumaan doono haddii macluumaadka guud ee ku saabsan naftiisa la faafiyo. Qaabkan madadaalada wuxuu naga caawiyaa dhisida cilaaqaadka waxayna kordhin kartaa isfahamka iyo is aaminaada dhexdooda.
Micnaha kale ee xanta ayaa loola jeedaa faafinta wararka, kuwaas oo inta badan xasaasiya ama dabeecadaha khaaska ah. Ma waxaan si aad ah u jecel nahay inaan noqono si qarsoodi ah siraha qof fadeexad leh? Macno malahan inay run yihiin iyo in kale. Waxyaabahaas oo kale xitaa ma aha inay ku bilaabaan sidii wax-nimo run ah, laakiin wax yar ayay u gudbiyaan asxaabta ugu dhow asxaabta kale, kuwaas oo iyagana u gudbiya asxaabtooda ugu dhow, sidaa darteed aakhirka natiijooyinka sifiican bay u muuqdaan, laakiin dhammaantood waa la rumeysan yahay. Sida ereygu usocdo: "Waxaad jeceshahay inaad rumeysato waxa liskaha ka dambeeya". Xanta noocaan ahi waxay dhaawici kartaa dhaawaca. Xanta xun ayaa si fudud lagu aqoonsan karaa iyadoo la joojiyo wada hadalka isla markiiba markuu qofku qolka galo. Haddii aadan ku dhicin inaad si toos ah qof ugu sheegtid, ma ahan wax mudan in lagu celiyo.
Xanta xun ama xanta xun waxaa loogu talagalay inay dhaawacdo sumcadda qofka. Tani waxay dhaafsiisan tahay gudbinta wax la maqlo. Tani waxay ku saabsantahay beenta la sheegay inay sababaan xanuun iyo murugo qoto dheer. Si fudud ayaa loogu faafin karaa internetka. Nasiib darrose, dadku waxay aamminsan yihiin arrinta daabacan in ka badan waxa dhegta looga sheegay.
Xanta noocaan ahi waxay umuuqataa inay tahay mid aan shaqsi ahaaneyn ilaa aad ka dhigatid bartilmaameedka xumaanta noocaas ah. Ardayda waxyeellada leh waxay u adeegsadaan qaabkan xagga ardayda kale ee aysan jecleysan. Isgaarsiinta internetka ayaa ku kicisa dhalinyaro badan inay isdilaan. Dalka Mareykanka, tan waxaa xitaa loogu yeeraa "bullycide". Waxaa la mid ah layaabna ma ahan markii Kitaabka Quduuska ahi leeyahay: "Ninkii qaldama ayaa indhuhu xumaanta geliyaa. (Maahmaahyadii 16,28). Waxay kaloo tiri: "Hadallada caytani waa sida cunto macaan oo si qumman ayay u yimaadaan" (Maahmaahyadii 18,8).
Waa inaan si cad uga hadalno arrintan: xanta ayaa u eg sidii bawdo yar oo dabayl kaxaynaysa oo meel kale u gudubta. Qaado toban baalal oo ku afuufo hawada. Markaa iskuday inaad mar labaad qabsato baalasheeda. Taasi waxay noqon laheyd howl aan macquul aheyn. Waxay la mid tahay xanta. Mar alla markii aad dunida qortid sheeko xariir, dib uma soo celin kartid maxaa yeelay waxay ku afuuftaa hal meel ilaa meel kale.
Soojeedinno ku saabsan sida aan si habboon wax uga qaban karno
Haddii uu jiro wax dhibaato ah oo u dhexeeya adiga iyo qof kale, xalli naftaada dhexdeeda. Cidna ha u sheegin.
Ujeedo noqo marka qof uu kugudaadiyo qanacsanaantaada adiga. Xusuusnow inaad kaliya maqli doonto aragtida qofkaas.
Haddii qof bilaabo inuu kuu sheego xanta, waa inaad bedeshaa mawduuca. Haddii mashquulka fudud uusan waxba sameyn, markaas dheh: «Wadahadalkeenna hadda si xun bay ii noqdeen aniga. Miyaanan ka hadli karin wax kale? » Ama dheh, "Ma lihi raaxo inaan ka hadlo waxa gadaashooda dadka kale ah."
Waxba ha ku dhihin dadka kale oo aadan dhihi karin iyaga hortooda
Markii aad ka hadlaysid dadka kale, weydii naftaada su'aalaha soo socda:
Ma runbaa (halkii laga qori lahaa, la qalloocin lahaa, la been abuuray)?
Way caawinaysaa (waxtar leh, dhiirigelin, raaxo, bogsiin)?
Waa dhiirrigelin (ku faraxsan, mudan tahay inaad wax kudarsato)?
Waa lama huraan (talo ahaan ama digniin)?
Waa naxariis (halkii laga murugoon lahaa, lagu majaajin lahaa, oo aan la xakamaynayn)?
Ka dib markaan tan ka maqalno qof kale oo aan kuu gudbiyo, bal aan sharaxno waxa la sheegay inay tahay xanta wanaagsan oo aad u sheegi karto qof isku dayo inuu kugu faafiyo xanta xun - sidaa darteed waxaan ka hortagaynaa wararka xanta ah inay noqdaan kuwa fool xun ,
waxaa qoray Barbara Dahlgren